Indawo yokupaka izimoto Ukukhanyisa LED, Commercial Lights | High Power Flood Lights
Posted on October 16, 2017 October 19, 2017 Amandla High LED-Flood Khanyisa Abakhiqizi
Indawo yokupaka izimoto Lights LED
Indawo yokupaka izimoto Lights LED kukhona isici esibalulekile ngaphakathi Parking Lot, ikakhulukazi ebusuku. Cabanga ngaphandle izibani yokupaka, umshayeli abakwazi ukubona umgwaqo ngokucacile futhi uthole isikhala yokupaka, yini ebangela netinkinga letijulile kungaba izinkinga zokuphepha. ukukhanya okugqamile olunikezwa yokupaka ukukhanyisa kunikeza ngeso elingcono futhi ukurekhoda CCTV; Ngakho-ke, usebenzisa izinga okusezingeni, nehlala njalo izibani yokupaka ukwenza isikhala ongaphandle umphakathi ephephile, okukhanya kusebentisa emandla agezi ngalokuyimphumelelo. Zethu Yokupaka LED uLoti Flood Lights zenzelwe ukufakwa ngaphandle endaweni ebanzi, lezi zinsimbi wenze isikhala ephephile kakhudlwana futhi ahlinzeke yokwamukela ngaphezulu ukukhanyisa elikhanyayo.
Ukuphepha Ipaki Lights
Broken & ukuwohloka izibani yokupaka ingavuthi ezadala umonakalo ngo isishingishane esinamandla nangengalo emoyeni. Abaningi inkampani yomshuwalense commercial awubhekene ukushayisana kubangelwa izingongolo umoya yizinambuzane. Izimpilo wezimoto abantu sina ezisengozini izinto lapho ezinkulu ezifana izibani commercial & LED izibani yokupaka nqwamana ngokumelene phansi nge force ephezulu isivinini somoya. TACHYON LED yokupaka ukukhanyisa usebenzisa umklamo evulekile, okusho kukhona isakhiwo eziyize phakathi nomugqa ukukhanya ngamunye. Izikhala phakathi yokupaka izibani iyunithi uvumele umoya ndima ngakho njengoba ukubekezelela umoya onamandla. Uma ubheka eduze, ungakwazi ukuthola ukuthi kukhona aminyene aluminium amaphiko ngoba ukushabalalisa ukushisa. Lokhu silondoloze lokushisa eziwumgogodla chips LED at ibanga aphansi; ukuze eminye ukunweba sesikhathi sokuphila futhi kuthuthukise ukukhanya. Lezi yizinto zokuphasa izingongolo zokuthwala yokupaka ukukhanya engeza elikhanyayo yokupaka izibani ukwenza indawo ephephile futhi basamukela esengeziwe izindawo zomphakathi, ezitaladini, imizila imigwaqo, futhi ake abantu sizizwe sivikelekile futhi silondekile ngaphezulu.
Yokupaka yethu uLoti Lights kusiza
Iyala ngogesi endaweni yokupaka commercial okuningi ukukhanyisa ngokuvamile edidayo kuyinkimbinkimbi. LED izibani yokupaka ibalulekile ukuze uthole ukuvikeleka hhayi kuphela ukuhlangabezana kokukhanyisa kwamazinga zokulawula kodwa futhi kumele bahlangabezane nezidingo ukugqama, nokusatshalaliswa ukukhanya. In the ukungabikho eziphambili lobuchwepheshe imoto elidayisa yokupaka commercial okuningi ukukhanyisa izingongolo amakhasimende ukhethe luminaires ethize, ukunquma isigxobo eziphakeme, kokukhanyisa imishini nezingongolo kuya isivinini somoya kule ndawo Lapho afanayo ukubaluleka Epa, zokuhlala landscape ukukhanyisa kanye nomklamo, usebenzisa izibalo precomputed futhi inhlanganisela, lapho befeza umsebenzi zezibalo ukupakisha commercial izibani yokupaka nezingongolo. Ngamanye amazwi, thina kuzokusiza umklamo ukukhanyisa. TACHYON izokunikeza MAHHALA DIALux LED Ipaki umbiko Ukukhanyisa sekulingisa & cabanga nemingcele bazifeza wena imfuneko yokupaka ukukhanyisa iphrojekthi.
I-Environmental Protection Agency ulawula kokubili ukukhanyisa izakhiwo commercial zokupaka nelungiselelo ukukhanya nokwabiwa ikholomu eziphakeme. Inani lwemidlalo ilungise engela lapho luminaire ihambisa kukhanyisa isigxobo Epa ukubaluleka iguqula ngqo ikhono commercial yokupaka ukukhanya isigxobo sika ukumelana meteorologically uzimisele ethize umoya isivinini sendawo ethile ngqo ubheke, ukuze ukwazi ukubona kukhona standard zamandla izibani yokupaka. TACHYON kuzosiza lemuka nokurarulula iziqondiso ezifanele uma ukuthenga LED yokupaka izibani. Iningi izikhala yokupaka zikhanyiswa izibani Fluorescent ukuthi ahlinzeke izibani iyunifomu. Nokho, izixazululo zanamuhla LED ungenza yokupaka ukukhanyisa iyashelela futhi ukonga. Lezi amalambu akhanya sifiphalisiwe futhi kalula kungenziwa kuhlanganiswe ukukhanyisa nokulawula izinhlelo motion izinzwa, okwenza kube lula ukusebenzisa ukukhanya ngokuyimpumelelo futhi kakhulu ukunciphisa izindleko energy. Ngaphezu kwalokho, le 100 W yokupaka ukukhanya Ungashintshanisa 400 W halide metal.
Ngokwezifiso Ipaki Lights LED
Indawo yokupaka izimoto Ukukhanyisa landscape yokuhlala eminye ngcono lula commercial izibani yokupaka futhi isigxobo amaphakheji. TACHYON inikeza khulula inkonzo ngokwezifiso amaklayenti ukuze unikele yokupaka izibani imikhiqizo kangcono. Sizokhetha ugongolo engeli ethize, amandla, izinhlobo izibani yokupaka uma-by-case nesisekelo. Ufuna ukuthola umbono ngaphezulu manje? Ungabeka nathi umlayezo ezihlobene yokupaka Lights noma iyiphi Esibanzi Area Lighting nge info@tachyonlight.com. Sine emhlabeni 12 isipiliyoni seminyaka ku Esibanzi Area Lighting & Indawo yokupaka izimoto Lights. unjiniyela wethu wezokusebenza kuyokusiza kwenze kube kwenzeke.
Izinzuzo Ipaki Lights LED
LED Ipaki Ukukhanyisa ihlinzeka inketho cool usizo ngezinkinga yokupaka. Okokuqala nje, LED khiqiza iyashelela inesikhala okukhipha, okusho ebanzi, Ukusabalala uhambisane kunalaba Metal Halide & HID. Nge okusezingeni eliphezulu ukukhanyisa ukufana LED Ipaki Lights, umsebenzisi roader ezifana umshayeli futhi abahamba ngezinyawo ukuzibona ngeso lengqondo kwendawo egandaywe ngamatshe & imoto emgwaqweni lecacile kubuye kube ukuvimbela ingozi kungenzeki. LED isibani for yokupaka ihlala isikhathi eside kakhulu kuneminyaka ezivamile incandescent light isibani. It has nomthelela omuhle yesondlo ithimba lakho ngoba yokupaka LED uLoti Lights kungaba ngendlela ephawulekayo ukunciphisa yesondlo yakho izindleko futhi imvamisa, kanye bill kagesi. Awunawo isidingo esikhundleni Ipaki Lights LED okungenani 15-20 iminyaka. Ngokufaka iGround Balance wena ezivamile Metal Halide Izibani noma HID ukuze LED yokupaka Lights, ungasiza ugcine imvelo.
Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kalula traffic izivakashi, abasebenzi, nomthamo odlulayo, kungakhathaliseki ukuthi ungumnikazi noma ephethwe, ngabe yokupaka kuyinto ezinkulu nezincane, yokupaka ukukhanyisa kuyadingeka. TACHYON izinga okusezingeni yokupaka izibani inikeza anhlobonhlobo ukukhanyisa ezifana amandla, isisindo futhi uvumelanise engeli ulingana noma ilungiselelo yokupaka ukukhanya izigxobo. Ezimweni eziningi, izibani ku yokupaka LED kuzoletha inzuzo enkulu zonke kwempahla ukuthi isebenzisa kubo. Inzuzo enkulu kuhlanganisa 95% kwegezi 70% ukulondoloza ugesi Bill. Ngaphezu kwalokho, sihlakulela yokukhanya anti-ukukhanya ukuze bagweme noma yikuphi ukucasuka ukuze bomgwaqo.
Umkhiqizo Uphenyo ku LED Ipaki Lights